China Spiral Wasket Gasket ifektri abakhiqizi | Nortech
Kuvunguza Gasket Walimala
Kuvunguza i-gasket elimele ukukhipha nokushisa ukushisa kanye nebanga lenuzi kanye ne-HDLE Kuvunguza isilonda gasket. I-NORTECH kuyinto enye yeChina ehamba phambili Kuvunguza Gasket Walimala Umkhiqizi Nomhlinzeki.
Kuyini i-Spiral Gasket Wounded?
Kuvunguza Gasket Walimala siqukethe umugqa wensimbi u-v-shape noma w-shape naphakathi kokugcwalisa okungasensimbi nokufaka insimbi. Ngokwama-flanges ahlukahlukene, ingaba ngaphakathi noma ngaphandle kwamasongo angaphakathi nangaphandle. Ingakwazi ukuhlangabezana nezimo ezinzima kakhulu zombili izinga lokushisa nengcindezi nangokumelana nemithombo yezindaba ecishe ibe yingozi neyingozi. Spiral isilonda gaskets iye kabanzi isicelo emkhakheni ukushisa exchange, qeda, Nuclear, HDLE, njll
Imininingwane ye-Gasket Yokulimala Kokulimala
Exhaust Kuvunguza Inxeba Gasket
I-gasket yesilonda esivuthayo esiyihlinzekile isusa ithonya lengcindezi, ukushintsha kwezinga lokushisa nokunyakaza kwemishini ngokungazweli kwalo ekuveleni kwamapulangwe. Ukumelana okuhle kakhulu, ukusebenza uphawu, ukusebenzisa impilo isikhathi eside. Lezi zici zifakazela ukuthi ilungele ngempela ukukhipha.
Amaphakethe Wound Wound for Heat Exchange
I-SWG yokushintshanisa ukushisa isetshenziswa ku-shell and tube type heat exchanger. Zingakhiwa ngosayizi abahluke kakhulu, bobunjwa, noma ngaphandle kwemigoqo eyodwa noma kabili, enendandatho yangaphakathi nangaphandle. Amabha wokudlula avikelekile eringini langaphakathi anganikezwa ngensimbi eqinile noma ukwakhiwa okubhadwe kabili. Izimbambo ziboshelwe ngokuphepha ku-ID yengxenye yesilonda esivunguza. Ama-gaskets ethu wokushintshanisa ukushisa akhiqizwa ngezinhlobo eziningana ukuhlangabezana nezicelo ezidinga kakhulu. Sicela unikeze imidwebo ethile uma i-gasket isetshenziselwa ukushisa okushisayo ngezimbambo.
Isetshenziselwa ini i-Spiral Gasket Wounded?
Kuvunguza Gasket Walimala yizinga lemboni lezindawo zokucwenga, amandla, amakhemikhali, amanzi angcolile, uginindela nephepha njll. Kusetshenziswa kakhulu izicelo ezingaphezu kuka-150 # class class. Yenziwe ngezinsimbi ezahlukahlukene, ama-gaskets wesilonda somoya asebenza ngokuba nomthwalo ocindezelayo akhama ukufinywa kwensimbi okuthi ngenxa yalapho v umumo unamandla okululama kokucindezelwa.
Langaphambilini Kokuzihlanganisa Steel Flange
Olandelayo: Ingcindezi ephikisiwe ibhalansi ye-Plug valve
Ukunwetshwa Kwenjoloba I-Twin Sphere Ehlangene